Enye yezinzuzo eyinhloko iphrojekthi kusukela Abadali of Bemisebe 4 Bethesda yikhono ukudala adventure zazo ezihlukile kusukela phansi njengophawu izikhala omkhulu futhi zihlukahlukene nemibandela ezitholakala umdlali ekuhambeni. Nokho, endabeni le game inkinga wukuthi kangangokuba ongakwenza kule mdlalo, futhi ayikaziwa kuwe, futhi uma wena thola isici esithile, khona-ke ukukwenza ezihambela nje. Ngisho uqeqesho lwenziwa ekuqaleni umdlalo kuhlala kakhulu hhayi ukhululekile kakhulu. Ngakho, bonke magic futhi zonke charm zomhlaba post-ezibhubhisayo ungabona, ubuka okungahleliwe nokuzama izinto ezahlukene. Futhi lo mhlahlandlela izokubonisa ukuthi kufanele ubhekephi ukuze uthole izimfihlo ezithakazelisayo futhi umxhwele kakhulu efihla le phrojekthi.
Nge nemizana kule game ungathola kumnandi, ngakho kufanele sizame ngiwavule ngokushesha ngangokunokwenzeka. Lokhu kwenziwa ngokwenza umugqa ezithile nezimfuno, khona-ke uba nethuba ukudala isiphetho zabo, lapho uzoqoqa abasindile, ukuthuthukisa ke, ukwakha izitolo, ukuhlwanyela ensimini, sokuvuna nokunye kuyatholakala. Nokho, inkinga enkulu kulokhu ezishintshayo. Yebo, kule izincazelo into ngayinye kukhonjiswe ukuthi ukusebenza autonomously futhi ngokuzimela isebenze. Kodwa akukho ndawo wawuthi izici ezithile uzodinga isebenze ngesandla, futhi ngezinye izikhathi ngisho lokuqoka abasindile ukusebenza kwelinye noma elinye iphuzu ukwenza kube esebenzayo. Ukuze abadlali abaningi kusimangaze lezi zici emashumini ambalwa amahora umdlalo play.
isibhamu sakho Usayizi kunendaba, kodwa kubaluleke kakhulu ukwazi ukumelana Umphikisi yakho ukuze uhlobo oluthile umonakalo. Kungaba lula ukushalazelela noma ukuziba, kodwa kungcono kakhulu ukumpompa ikhono ilungelo njalo ukufinyelela ulwazi mayelana nokuthi ukuhlasela izinhlobo isitha sakho has a ukumelana ephakeme. Ngakho ungakwazi ngokushesha iwukudambisa isitha ngaphandle zokuchitha Ammo eziyigugu.
Elinye iphuzu, okuyinto ezingasehlela akuyona indlela engcono wachaza ekuqeqesheni - a ezimfushane. Uma uhlamvu yakho iyohlala phansi, bese ngokushesha uphendulela isithonjana, okubonisa ukuthi ongene kwimodi ethule cwaka. Bethesda idume akulona AI ehlakaniphile kakhulu imidlalo yabo, kungani fihla kusukela isitha endle kuba lula kakhulu kunokuba ucabanga. Ngaphezu kwalokho, uma uke waphawula ukuthi uhlale phansi ngasiphi indawo yokuhlala, futhi uhlamvu yakho ithatha isikhundla ukuzivikela lapho ungase ukwazi uzibheke ukuze umlilo.
Enye yezinselelo ezinzima lo mdlalo lincane Slots ukugcina izinto ezitholakele. Futhi uma uya ukuzingelwa ngempango ke ukubheja Okungcono ongakwenza ukuze uqiniseke ukuthi ukuba akhishwa amakhono "isihambi oyedwa", okuvumela uhlamvu yakho ukuthatha umonakalo owengeziwe futhi ukugqoka izinto eziningi, uma uya ngaphandle kumngane. Nokho, inja yakho njengenkulumo kulesi simo, umngane womshado, ukuze ungakwazi ukujabulela amabhonasi, okuyinto ikunika ikhono ngenhla, futhi sigcine izinto Slots inja.
Zonke abasindile nabo usebenzisana kuleyandawo lungamelela kuwe njengoba nje kufanele insimbi - kodwa hhayi inja yakho. Futhi uma ungafuni yikho ehlane elikhulu, kufanele ukwakha ngaye idokodo e isiphetho zako ezisemqoka, futhi njalo elithumela lapho awudingi - ukuze ukwazi ukuba nesiqiniseko sokuthi lowo njalo-ke uzothola izindawo lapho babethumela khona.
abadlali abaningi, owaqala umdlalo ku Bemisebe 4 babengabafuni eselingelwa ukubheka kriolyatora isikhali emangalisayo onamandla, efihlekile ngemuva ingilazi ngokuqinile kwahluthulelwa e Vault 111, lapho umdlalo iqala. Ukuze uthole kuye waphuma khona, kudingeka ube uyingcweti kuphulwa ukuthi kuthatha amahora amaningi play. Nokho, kukhona workaround, uyaphinda futhi kule ndawo wena kuzokusiza inja yakho. Wena ukumhlangabeza ngemva kwesikhashana, washiya Vault, ngakho ungakwazi masinyane ubuyele emuva uhlanze igumbi kusukela ngempango futhi linikela isitjengiso sokobana inja ukubheka izinto. Ngokuyisimangaliso kriolyator kuzoba imihlathi inja, futhi inhlanhla, izophinda unikezwe futhi elinamanzi amaningi nenala nezinhlamvu.
Uma wopha ozitholayo elihlobene ne ukuguqulwa izikhali, ungavula ngisho isibhamu eziyisisekelo zibe into emangalisayo onamandla ngaphandle kwezinkinga. Into ebaluleke kakhulu lapha - njalo ususelwe imfashini awudingi izikhali, hhayi ukudayisa kanye nabo - ukuze uzoba nezinto ezidingekayo ukusebenza, futhi ngezinye izikhathi ngisho nalezo uthole nawe ngenye ngeke kwenzeke.
Ngaphezu ukuguqulwa, uzophinde ubone ukwenziwa izikhali, okusho ukuthi noma iyiphi isibhamu sakho, ungaqamba kabusha ngendlela othanda ngayo, kunoma iyiphi banebhentshi. Kodwa futhi eduze indawo Vault 111 yilapho kungashintsha ukubukeka izingalo.
Uma uya kwimenyu enkulu yalo mdlalo, ungakwazi ukushintsha ngokubonisa yakho PIP-Boy, noma kunalokho umbala waso. Kunezindlela eziningana ongakhetha kuzona, ngakho ungakwazi ukukhetha omunye evumelana nawe umhlabeleli, kodwa okuhamba phambili kwe-yezizathu eziphathekayo ukukhetha omhlophe, ngoba ngaleso sikhathi uyokwazi ukusebenzisa PIP-Boy njengendlela flashlight khulula.
Kulo mdlalo kukhona amathuba amaningi ekubumbeni futhi kumele isetshenziswe ngokuhlakanipha - ke uyokwazi ukumpintsha out esiphezulu kohlelo. Ezinye izithako Crafting ngesinye isikhathi kunzima kakhulu ukuthola, ngakho-ke njalo ngokucophelela ukuzisebenzisa, ngakho musa uzisole ukulahlekelwa.
Umthetho ofanayo owenziwe ngomthofu owawusetshenziswa "Skyrim" osebenza kuleli cala - uma ufuna ukubuyela ku-kakade waphundla indawo, kodwa ukuze kwakukhona zonke izitha efanayo futhi ngempango, uzodinga ulinde izinsuku ezingamashumi amathathu, bese umdlalo ngeke ngokuzenzakalelayo ukubuyisela indawo kwindlela kwaba ekuqaleni.
Ngeshwa, umdlalo omusha akuyona ngaphandle izimbungulu kanye glitches, kodwa uma abanye amabhlogo isidalwa indlela yakho kuphela out, washaya ukuthungwa umnyango, ungagcina umdlalo futhi ukulayisha ngalo sisitsha. Kuyoba avuse respawn at the indawo yamanje, futhi ungaqhubeka ukudlula ngokuphepha.
Kanjani pokestop e "Pokemon GO": isitatimende
"Endless Summer": umdlalo Ukudlula
Umgodi ngumgodlana omncane. Kodwa hhayi kuphela
Biography Remarque - impi nokuthula, uthando futhi lokusungula
Izinsongo Military ekuphepheni waseRussia kazwelonke. ukuphepha kaZwelonke
Eziqoshiwe e-Easter Island - enye yezinto eziyimpicabadala enkulu kunazo zonke emhlabeni!